» भोलिदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला, कति पाईन्छ ब्याजदर ?
भोलिदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला, कति पाईन्छ ब्याजदर ?
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार १८:११
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भोलिदेखि ८ दशमलव ५ प्रतिशत आरबीबीएल डिबेन्चर,२०८३ नामको ऋणपत्र बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले ६ वर्ष अवधि भएको वार्षिक ८ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याजदर भएको कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैंया (२५ लाख कित्ता) मूल्य बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
बैंकले भेलिदेखि निष्काशन गर्न लागको ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिनेछ । प्रतिकित्ता १ हजार दरका कुल २५ लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट संगठित संस्थाहरुलाई बिक्री गरिने भएको छ।